Taliye ku xigeenka Ciidanka Boliska gobolka Sh/Hoose oo shalay loo magabaay Ibraahim Walal Maxamed oo iska casilay xilkaasi Maanta. | JILYAALE_ONLINE
Taliye ku xigeenka Ciidanka Boliska gobolka Sh/Hoose oo shalay loo magabaay Ibraahim Walal Maxamed oo iska casilay xilkaasi Maanta.
Taliye ku xigeenka Ciidanka Boliska Ibraahim Walal Maxamed ee dhawaan taliska guud ee ciidanka Boliska ee dowladda KMG ah ay u magacowdey gobolka Shabeelaha Hoose ayaa arinta magacaabista Taliye ku xigeenka Ciidanka Boliska Maanta gaashanka u daruurey.
Ibraahim Walal ayaa sheegay in magacaabistaasi loo magacaabay Taliye ku xigeenka Ciidanka Boliska uu bari ka yahey, markii la magacaabayeyna aanu war u hayen balse uu warbaahinta uun ka maqley.
Shir jaraa’id oo uu Maanta ku qabtey degmada Marka ee xarunta Gobolka Shabeelaha Hoose ayuu ka sheegay in aanu qabaneyn xilka loo magacaabey iskana casilayo ayna tahey arin la isaga dhaqaaqey oo aanu markeedii hore isaga lasoo wargelin.
Waxaa uu sidoo kale ka sheegay shirkiisa jaraa’id in aanu diyaar u aheyn in uu xil ka qabto dowladda KMG, arinta ay ku dhaqaaqeen taliska Boliskuna ay tahey mid iyaga ku keli ah oo aan la ogsooneyn.
Waxaa kaloo uu sheegay Ibraahim Walal in aanu laheyn khibrad ciidan oo uu yahey macalin dugsi Qur’aan shaqadiisa Macalin nimana uu sii wadanayo.
Waa mas’uulkii ugu horeeyay oo ka tirsan Saraakiil dhowr ah oo loo magaabey ciidanka boliska ee Gobolka Shabeelada Hoose, ka dib markii Saraakiishii hore xilalkoodii looga qaadey.
Ma jiraan wax war ah oo wali ka soo baxey Saraakiisha kale ee isla marka lala magacaabey Sarkaalkan Maanta iska casiley xilkii dhawaan loogu magaceebey ciidanka Boliska ee Gobolka Shabeela Hoose.
← Nin Somali ah oo lagu diley Minneapolis, USA.
Dagaal xoogan oo dhex maray ciidanka maamulka Afgooye iyo kuwa dhowaan lagu soo tababaray dalka Ethiopia. →